Mety hanimba ny orinasanao ve ny fanadiovana be loatra? | Martech Zone
Mety hanimba ny orinasanao ve ny fanadiovana be loatra?
Alakamisy, Aprily 2, 2015 Douglas Karr
Personalization, votoaty mavitrika, pemasaranam-barotra, fanaraha-maso IP… fantatsika rehetra fa mankasitraka sy mamaly tsara ny hafatra sy ny traikefa natokana ho azy ny mpanjifa, saingy afaka mandeha lavitra ve ny mpivarotra? Accenture dia namoaka ny valin'ny fanadihadiany manokana izay milaza YES.
Topimaso amin'ny fanadihadiana momba ny personalization ho an'ny mpanjifa
The Fanadihadiana momba ny personalization accenture nandinika ny andrasan'ny mpanjifa manodidina ny traikefa manokana momba ny fiantsenana ary namantatra ny karazana haitao fivarotana, ny traikefa natokana ho an'ny mpanjifa sy ny fifandraisana - an-tserasera sy amin'ny fivarotana - mety hiainan'ny mpanjifa.
Paikady fandraisana ny personalization
Ny fifandraisana sy fanolorana mpivarotra an-tsena ankasitrahana indrindra voatanisa ao amin'ny valin-teny dia:
Automatic fihenam-bidy amin'ny ora ho an'ny isa tsy mivadika na tapakila (82 isan-jato)
Fampiroboroboana amin'ny fotoana tena izy (57 isan-jato)
mifameno soso-kevitra momba ny entana (54 isan-jato)
Raha ny momba ny traikefa an-tserasera manokana no resahina dia ny:
Website optimised amin'ny alàlan'ny fitaovana (birao, tablety, finday) (64 isan-jato)
Tolotra fanolorana ho an'ny entana dinihin'ny mpanjifa mafy sy ny fitetezana tranokala intuitive miankina amin'ny hoe te-hizaha ny mpividy (59 isan-jato)
Ampitahao ny vidiny na mividy entana (59 isan-jato)
Paikadin'ny personalization tsy mahazo aina
Raha ny fanadihadiana natao dia tsy dia mahazo aina amin'ireto tetikady manokana ireto ny mpanjifa:
mpaninjara nilaza tsy mividy entana an-tserasera ivelan'ny teti-bolany any amin'ny toerana misy ny tapakila lehibe toy ny fanatsarana trano sy fivarotana elektronika (46 isan-jato).
Mpivarotra ambongadiny sy fivarotana enta-madinika nanoro hevitra azy ireo tsy mividy entana an-tserasera ivelan'ny fameperana fihinany (40 isan-jato).
Mpiara-miasa store izay afaka manome tolo-kevitra mifototra amin'ny olan'ny fahasalaman'ny fianakaviana any amin'ny magazay (42 isan-jato).
Mpiara-miasa amin'ny fivarotana miarahaba azy ireo amin'ny anarany rehefa miditra amin'ny fivarotana izy ireo (36 isan-jato).
Mpaninjara manome azy ireo valiny avy amin'ny namana an-tserasera (52 isan-jato).
Ny personalization dia mety ho fomba matanjaka ho an'ny mpivarotra mba hanavahana ny mpifaninana aminy, hampitombo ny haben'ny harona ary hananganana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa. Mba hampiharana amin'ny fomba miavaka ny personalization amin'ny fantsona rehetra, ny mpivarotra dia mahazo tombony amin'ny fahatakarana ny mpanjifa amin'ny sehatra midadasika ary koa amin'ny tsirairay - mamaritra hoe aiza no paikadin'ny personalization no mitarika tsara ny valin'ny asa aman-draharaha, ary manome safidy ho an'ny mpanjifa lehibe ny fomba tian'izy ireo handray anjara. Dave Richards, talen'ny fitantanan-draharaha amin'ny varotra fanaingoana an'ny Accenture
Misy ny fanavahana sasany miankina amin'ny demografikan'ny mpanjifa. Aza hadino ny mamaky ny Takelaka misy ny accenture ary zahao ireo fikarohana rehetra.
Tags: Accenturefanadihadiana accenturepersonalization
Dingana 12 hananganana fangatahana ho an'ny masoivohonao vaovao